Nke a bụ etu WhatsApp Business ga-esi rụọ ọrụ, nke amalitela ule mbụ ya na Spain | Akụkọ akụrụngwa
WhatsApp na-aga n'ihu na-arụ ọrụ nke ọma na ọdịnihu ya, yana mgbakwunye na akụkọ na atụmatụ ọhụrụ ọ na-ebupụta site n'oge ruo n'oge, ọ dịlarị karịa ihe ekwenyela na Ha ebidola ịrụ ọrụ na Azụmaahịa WhatsApp yana ọ bidola ịrụ ọrụ na mba anyị. Versiondị ngwa ngwa a ga-abụ nke eji ụlọ ọrụ nwere ike ịme mmekọrịta chiri anya na ndị ahịa ha.
Ọtụtụ nkwụsị, site na ụlọ ọrụ ụfọdụ na-anwale WhatsApp Business, emeela ka anyị mata ụfọdụ akụkụ nke ngwa ọhụrụ ahụ yana ụfọdụ nkọwa nke otu ọ ga-esi rụọ ọrụ. N'ezie, anyị amatabeghị ụgwọ WhatsApp a ga-enwe maka nnukwu ụlọ ọrụ.
1 Kedu ihe anyị ga-ahụ dị ka ndị ọrụ azụmaahịa WhatsApp?
2 Kedu ihe ụlọ ọrụ nwere ike ịme?
Kedu ihe anyị ga-ahụ dị ka ndị ọrụ azụmaahịa WhatsApp?
Otu nchegbu dị ukwuu nke ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ WhatsApp bụ na anyị ga-ahụ onwe anyị mgbe ịnweta otu n'ime profaịlụ ndị a, na ikike dịkwa a willaa ka ị ga-akpọtụrụ anyị. Banyere nke abụọ, enweghi ọtụtụ ozi n'oge a, yabụ anyị ga-edozi maka ịchọpụta ụfọdụ ihe gbasara nke mbụ.
Dabere na ụlọ ọrụ ahụ, anyị ga-enwe ụfọdụ ọrụ ma ọ bụ ndị ọzọ. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ ga-eji ya dị ka ị pụrụ ịhụ na vidiyo anyị na-egosi gị n'okpuru, ma ọ bụ dị ka ọwa ọrụ ndị ahịa iji mee ka obi abụọ onye ọrụ doo anya ma ọ bụ zaghachi arịrịọ dị iche iche, ihe nke ụlọ ọrụ ụfọdụ na-eme ugbu a.
Ihe dị ka ihe doro anya bụ na agaghị enwe otu ụdị akaụntụ Business WhatsApp, mana enwere ike iru anọ;
Akaụntụ azụmahịa: ọ ga-abụ akaụntụ nkịtị nke ga-akwaga na profaịlụ azụmahịa
Akaụntụ azụmahịa gosipụtara: ọ ga-abụ akaụntụ kwagara na profaịlụ azụmahịa, nke a ga-enyocha ma nwee ike iji ngwa mkpanaka maka ụlọ ọrụ
Akaụntụ azụmaahịa nwere baajị lara ezumike nká: ga-abụ akaụntụ ndị ahụ gosipụtara na otu ụbọchị, mana na n'ihi mmejọ ma ọ bụ zipu spam, akwụsịla ikwenye. Anyị na-eche na ọ nweghị ụlọ ọrụ n'akụkụ ọ bụla nke ụwa ga-achọ ịnweta ụdị akaụntụ a
Azụmaahịa na akaụntụ ọkọlọtọ: ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ịkwụsị inwe akaụntụ azụmahịa, ọ ga-enwe akaụntụ nke ụdị a
Kedu ihe ụlọ ọrụ nwere ike ịme?
Nke mbụ, anyị ga-amarịrị na ụlọ ọrụ ga-enwe ngwa a kapịrị ọnụ, nke opekata mpe ugbu a ga-adị naanị maka ngwaọrụ nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo. You nwere ike ịhụ ụfọdụ nhọrọ ụlọ ọrụ ga-enwe na onyogho anyị na-egosi gị n’okpuru;
Nakwa ụfọdụ n'ime atụmatụ ụfọdụ nke Business WhatsApp ga-abụ ihe ndị a;
Ekwe omume nke na-ezipụ ozi na-akpaghị aka, na-enwe ike ọbụna guzosie oghere ụbọchị
"Statistics" ngalaba ebe ị pụrụ ịhụ ozi zitere na natara
Nkwado maka mbadamba nkume dị ka anyị niile maara ugbu a adịghị na ụdị ọkọlọtọ
Enwere ike ịnweta akaụntụ n'otu oge dị ka nkeonwe ma ọ bụ ụlọ ọrụ, ma ọ bụ weghachite akaụntụ nkeonwe na ụlọ ọrụ na-adịgide adịgide
Gbakwunye nọmba ekwentị na WhatsApp agakwaghị abụ utopia maka ụlọ ọrụ azụmaahịa WhatsApp
Ugbu a Enweghị gọọmentị ụbọchị maka mmalite nke Business WhatsApp, ọ bụ ezie na ihe doro anya bụ na nzọ nke Facebook, onye nwe ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, o yiri ka ọ na-agbasosi ụwa azụmahịa ike. Ma ọ bụ na WhatsApp maka ndị mmadụ n'otu n'otu anyị nwere ike ịsị na ọ abatagogo ya na njedebe na oke oke nke mmegharị yana ọkachasị uru ka belata.
Think chere na ngwa azụmaahịa ọhụrụ nke WhatsApp ga-aga nke ọma ma na azụmaahịa ma n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu?. Gwa anyị uche gị na oghere echekwara maka nkọwa na post a ma ọ bụ site na netwọkụ ọ bụla ebe anyị nọ, na ịnụ ọkụ n'obi ịmata echiche gị na nchegbu gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Nke a bụ etu WhatsApp Business ga-esi rụọ ọrụ, nke amalitela ule mbụ ya na Spain